ह्वात्तै घट्यो प्याजको मूल्य,लसुनको कारोबार ठप्प
सिरहा,माघ २९ गते । प्याजको मूल्य घटेर प्रतिकेजी सय रुपैयाँ भन्दा तल झरेको छ। कुनै समय २ सय ५० रुपैयाँ रहेको प्याजको मूल्य अहिले घटेको हो। उपत्यकाकै सबैभन्दा ठूलो तरकारी बजार कालिमाटी तरकारी तथा फलफूल बजारमा गत आइतबारदेखि प्रत�
गैरकानुनी विदेशी लगानी ११ अर्ब, सबैभन्दा बढी नेपाल भित्र्याउनेमा सुमार्गी
सिरहा,माघ २८ गते । गैरकानुनी रूपमा हालसम्म ११ अर्ब रुपैयाँ विदेशी लगानी भित्रिएको तथ्यांक सरकारले फेला पारेको छ । उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका सहसचिव दिनेश भट्टराईको नेतृत्वमा गठित समितिले २७ कम्पनीले कानुनी प्र�
सुनको मूल्य ४०० ले बढ्यो, तोलामा कति पुग्यो ?
सिरहा,माघ २६ गते । नेपाली बजारमा आइतबार सुनको मूल्यमा वृद्धि भएको छ । नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासंघका अनुसार आइतबार छापावाल सुनको मूल्य तोलामा ४०० रुपैयाँले बढेको हो ।&nbsp; यसअघि शुक्रबार तोलामा ७५ हजार ६०० रुपैयाँमा कारोबार भ
जनकपुरमा पेट्रोल छर्केर औषधी पसलमा आगो लगाइयो, ९० लाखको क्षति !
सिरहा,माघ १७ गते । प्रादेशिक अस्पताल जनकपुरको अगाडीमा रहेको कल्पणा औषधी पसलमा पेट्रोल छर्केर आगो लगाएको छ । आगोले औषधी पसलमा रहेका करिब ९० लाखभन्दा बढीको औषधी जलेर नष्ट भएको हो । विहिवार मध्यरातमा अज्ञात समूहले औषधी पसलमा पछा�